२०७५ बैशाख २४ सोमबार १२:३९:००
भव्य कोठा । चित्ताकर्षक सजावट । भित्तामा प्रतिध्वनित भइरहने पियानो–धून । लहरै राखिएका आदिम वास्तु–सौन्दर्य । लाग्छ— घरमा सुखै–सुख प्रगुम्फित छ ।
तर, होइन । यहाँ त केवल निरुद्देश्य जीवन सलबलाइरहेको छ । बाँच्नुको पीडा, असीम दुःखको तीव्र छटपटाहट छ । बेचैन छ मन । विशृंखलित छ जीवन !
समय–यौवनको प्रतिछाया हो । समय दिनहुँ तन्नेरी बन्दै जान्छ तर मानिस बूढो बन्दै जान्छ । र, छाड्दै जान्छ आ–आफ्ना पदचापहरू । हुन सक्छ— सुख–दुःखको निःस्वास पनि ! त्यसैको आभाष हो– ‘तीन बहिनी’ !
एन्टोन चेखब– यथार्थवादी धाराका परिचायक हुन् । सन् १८६०मा जन्मिएका रसियाली लेखक चेखब आधुनिकता र विसङ्गतपूर्ण जीवनको उद्घाटन गर्छन्, लेखनका माध्यमबाट । उनका बहुसंख्यक कथा त्यसैका ध्वनि बनेका छन् ।
पेशाले मेडिकल चिकित्सक तर कथाकर्ममा ज्यादा विश्वास गरे र त जीवनयापनका अनेक निःस्वास, उच्छ्वास, उनका रङ्ग–कौशल बनेका छन् ।
‘द सिगल’, ‘अंकल भान्या’, ‘चेरी अर्किड’ लगायत विश्वविख्यात नाटकका सर्जक चेखबकृत ‘थ्री सिस्टरर्स’को नेपाली अनुवाद ‘तीन बहिनी’ शिल्पी थिएटर, बत्तिसपुतलीमा वैशाख २१ गतेदेखि मञ्चन भइरहेको छ । र, यो नाटक जेठ १२ सम्म मञ्चन हुनेछ ।
घनश्याम श्रेष्ठको परिकल्पना÷निर्देशन रहेको ‘तीन बहिनी’लाई आकारले मञ्चमा उतारेको हो ।
दिवंगत सैनिक अधिकृत पिताका तीन छोरी, जो राजधानीबाहिरको उदेकलाग्दो संसारमा बाँचिरहेका छन्, जसको हिजोको उमेर घडीको टिकटिकसँगै ओइलिँदै जान्छ । हिजोका सपना, आजका विपना होइन, भ्रमका थपना बनिथिन्छन् । सबैले बाँचेका हुन्छन् आफ्नो हिस्साको समय । तर, ‘तीन बहिनी’का पात्रहरूले निकै बोझिलो समय बाँचिरहेका छन् ।
स्वर्गबासी सैनिक अधिकृतकी तीन छोरी– आभा, माया र रिना । नाटकका केन्द्रीय चरित्र यिनै हुन् । र, यिनै तीनै चरित्रको वरिपरि नाटकको रोटेपिङ मच्चिइरहन्छ ।
यौवनवयबाट प्रौढतिर उक्लिइसकेकी आभा अविवाहित छिन् । उनको निराशा र मुर्च्छनाले हाम्रो सहरीया र पछिल्लो समयका ग्राम्य–जनजीवनका केही हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनी आफूसँग पटक्कै खुसी छैनन् । र, छैनन्, आफू बाँचिरहेको र बितिरहेको समयसँग पनि । हामीले आज बाँचिरहेको समय पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो । अझ चेखोब भन्छन्– अब २०० वर्षपछाडिको समय पनि त्यस्तै निराशायुक्तै रहन्छ । आफ्ना पिता–पुखाभन्दा जान्नेबुझ्ने हुँदा पनि मानिस असन्तोषको ज्वाला बोकेर बाँचिरहेका छन् । त्यसैको लप्कामा पलपल जलिरहेका छन् । ‘तीन बहिनी’ त्यस्तै उच्छवास हो ।
अर्की दिदी मायाको जीवन पनि स्वाभाविक लयमा छैन । लोग्नेसँगको सम्बन्ध निकै निरसिलो बनिरहेको छ । समय पनि उस्तै पट्यारलाग्दो । त्यसैले उनी कर्णेल आशुतोषसँग सघन प्रेममा छिन् । सन् १९०० मा चेखोवरचित ‘थ्री सिस्टरर्स’ले ठ्याक्कै आजको जस्तै यौनविकृत मनोदशालाई कसरी उत्कण्ठित गर्न सक्यो होला भनेर घोत्लिन विवश बनाउँछ ।
कान्छी रिना । २० वर्षको हुँदा शुरू भएको नाटक उत्तरार्द्धमा पुग्दा ३० वर्षकी हुन्छिन् । समयको पदचापमा यौवनको राप–ताप छाड्दै आएकी उनको राजधानी जाने मनोकामनाले नाटकलाई अन्तिमसम्मै गति दिइरहन्छ ।
सैनिक अधिकृतका छोरा दीपजङ्गले देहाती निकितासँग लगठनगाँठो कस्छ । क्रोधको हुरी बोकेर आएकी उनले घरको धुरी डगमगाइदिन्छिन् । निकिता र तीन दिदीबहिनीको निरपेक्ष सोचले परिवार एकपछि अर्को झमेलामा फस्दै जान्छ ।
एउटै छानामुनि ओत लागेका अनेक विरोधाभाष चरित्र र त्यही स्वभावजन्य कारणले दुर्घटित बन्न पुगेका सपनाको सिलसिलालाई एउटै सूत्रमा उन्नु चानचुने काम हुँदै होइन । त्यसलाई मञ्चमा सादृश्य उतार्न सक्नु झनै कष्ठसाध्य कुरा हो । तर, यस मानेमा सफल छन्– निर्देशक ।
त्यसो त चेखबका नाटकमा विनोद र करुण रसको सम्मिश्रण पाइन्छ । त्यसको झल्को ‘तीन बहिनीमा नभेटिने होइन । तर, धाराप्रवाह सम्वाद र क्लिष्ट अभिव्यञ्जनाले दर्शक कहिले उत्फुल्ल त कहिले रनभुल्लमा परिरहन्छन् । र, अन्तिम दृश्यांशले नाटक वियोगान्त हो भन्न करै लाग्छ ।
यो नाटक संवृत्त हुँदाताक रुस तीव्र औद्योगिकीकरणको प्रश्रवमा थियो । त्यसबाट आधुनिकता पैदा हुने छर्लङ्गै थियो तर त्यो चानचुने कठिन थिएन । अतः नाटकले हाम्रो विकासे सपना र समृद्धिको मनोकामनालाई धेरेथोर प्रतिनिधित्व गरेको छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । बारम्बार पात्रहरूमार्फत ‘राजधानी’प्रतिको लगावलाई देखाउन खोज्नुको अर्थ हो— समाज जुनसुकै भए पनि शहरीप्रतिको मोह सबैको उस्तै हुन्छ ।
स–साना घटनाको सिलसिला । आजभन्दा एकसय ११८ वर्षअघिको रुसको औद्योगिकीकरणउन्मुख सामाजिक मनोदशालाई मञ्च–सापेक्ष तुल्याउनु ज्यादै कष्टसाध्य कुरा हो । अझ नेपाली स्वादमा पस्किएर यहाँका दर्शकको अनुहारमा प्रतिविम्बत तुल्याउनु झनै गाह्रो कुरा हो । यसमा सफल देखिन्छन् अनुवादक–मेघराज अधिकारी । त्यसमाथि भौतिक वस्तु (प्रप्स) प्रयोग पनि जीवन्त छ । कलाकारका गतिविधि र उनीहरूले प्रयोग गर्ने सबैजसो ‘प्रप्स’ सकेसम्म वास्तविक छन् ।
मूलतः ‘तीन बहिनी’ मेलोड्रामा हो । शारीरिक हाउभाउ, संवादको घनत्व र मञ्च सजावटमा यस्तो विधालाई संसारभर रुचाइन्छ । तर, समकालीन नेपाली ‘मेलोड्रामा’ अझै पनि जटिल संवादको धङ्धङीबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । यो समस्या अनुवादित नाटकमा झनै भयंकर छ । अनुवाद गरेर नेपाली समाजअनुकूल बनाउने प्रयास गरिए पनि त्यसअनुरूप संवादमा काम गर्न नसक्दा भातमा ढुंगा लागेको जस्तो हुन्छ । नेपाली भाषामा अंग्रेजी वा हिन्दीको जस्तो एकरूपता छैन । क्षेत्रीय भाषिकालाई छेउमा राख्ने हो भने आम रूपमा लेखिने र बोलिने भाषा फरक छन् । झर्रो भाषाको आफ्नै मीठास छ । आमदैनिकीमा बोलिने भाषा प्रयोग गर्दा दर्शकले छिटो नाटकसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छन् । ‘तीन बहिनी’ यो समस्याबाट मुक्त हुन सकेको छैन । त्यससँगै मानवीय संवेदनाबाहेक नाटकको समग्र कथा र सेटिङले दर्शकलाई अपनत्व अनुभव गराउन सक्दैन । रुसी समाजको सेरोफेरोमा लेखिएको भए पनि नेपाली जीवनशैली र समाजअनुसार ढाल्न सकिएको भए ‘तीन बहिनी’ अझै उम्दा बन्न सक्थ्यो ।
श्री ओम रोदन